Xidigii Ay Ku Tartamayeen Man United, Real Madrid, Arsenal, Juventus, Liverpool & Kooxaha Kale Ee Adrien Rabiot Oo Afka Furtay Iyo Kooxda Uu Wada Hadalka Kula Jiro. - Gool24.Net
Xidigii Ay Ku Tartamayeen Man United, Real Madrid, Arsenal, Juventus, Liverpool & Kooxaha Kale Ee Adrien Rabiot Oo Afka Furtay Iyo Kooxda Uu Wada Hadalka Kula Jiro.
Xidiga xulka qaranka France ee Adrien Rabiot oo xili ciyaareedkii dhamaaday ay kooxda PSG go’doon iyo cuno qabatayn adag ku soo rogtay ayaa afka furtay wuxuuna ka hadlay hal koox oo uu wada xaajood kula jiro.
Adrien Rabiot ayaa hore uga mid ahaa ciyaarta shaxda PSG booska joogtada ah ku haystay laakiin khilaafkii xagaagii hore ka soo in uu Barcelona ku biiri lahaa ayaa sabab u noqday in xaalad xun uu galay.
Laakiin xaalada Adrien Rabiot ayaa musiibo noqotay markii uu Like-gareeyay muuqaalka Evra oo u dabaal degayay guushii Manchester United ay PSG kaga reebtay Champions league markaas oo uu Rabiot muujiyay cadhada uu u hayay kooxdiisa PSG ee liiska kooxdeeda ka saartay.
Kooxo badan oo ay ka mid yihiin Manchester United, Liverpool, Arsenal, Real Madrid iyo Juvnetus ayaa lala xidhiidhinayay in Adrien Rabiot ay si xor ah kula soo wareegi doonaan marka uu heshiiskiisa PSG dhaco June 30.
Laakiin kooxda Juventus oo khibrad layaableh u leh in ay ciyaartoyda si xor ah kula soo wareegto ayaa haddaba noqotay kooxda wada hadal rasmi ah la furtay Adrien Rabiot sida uu xidiga reer France u sheegay wargayska tuttosport.
Sida lagu daabacay wargaysyada Talyaaniga ee Corriere dello Sport iyo Tuttosport kooxda Juventus ayaa hadda wada hadal toos ah la furtay Adrien Rabiot.
Xidiga reer France ee Adrien Rabiot oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Waa run, Juventus ayaa aniga i soo raadsatay, midkaayaba kan kale ayuu la hadlayaa”.
“Anigu in badan ayaan jecelahay Italy, in aad joogto goobtan layaabka leh, waad nasanaysaa oo aaad dib isku soo saaraysaa. aniga waxaa i sugaya xili ciyaareed dalab badan” ayuu Adrien Rabiot hadalkiisa raaciyay.
Laakiin Adrien Rabiot ayaa sheegay in aanu wali go’aan ka gaadhin mustaqbalkiisa oo uu xaalada qiimaynayo wuxuuna yidhi: “Waanu qiimaynaynaa, waxba ma sheegi karno, anigu wali ma ogi”.
Adrien Rabiot oo si gaar ah uga hadlaya Juventus ayaa yidhi: “Juventus waa koox wayn halkaas oo uu ciyaartoy kastaaba doonayo in uu tago”.
xidiga reer France ee Adrien Rabiot oo Manchester United ka hadlaya ayaa yidhi: “Manchester Uited miyaa? iyaduna waa la mid. waxaa waajib igu ah in aan go’aan ka gaadho. Hadda fasax ayaan ku jiraa”.
Adrien Rabiot ayaa hadda u muuqda mid go’aan ka gaadhi doona kooxdiisa cusub ee sida xorta ah ugu wareegi doono waxaana ugu cad cad kooxaha Juventus iyo Manchester United balse wali waxaa jira kooxo badan oo doonaya in ay tartanka ku sii jiraan.